Madaxda Caalamka Oo Mudiqsho Soo Gaarey Kana Qaybgalaya Xafladda Caleema Saarka | Maakhir News	Home
Sunday, September 16th, 2012 | Posted by adminone Madaxda Caalamka Oo Mudiqsho Soo Gaarey Kana Qaybgalaya Xafladda Caleema Saarka
Wefdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Raysalwasaare kuxigeenka Turkiga Bekir Bozdag ayaa goordhaweyd ka degay magaalada Muqdisho, Wefdigan oo horey loo sii shaaciyey ayaa maanta ka qaybgalaya xafladda lagu caleemo saarayo Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya ee dhawaan lagu doortey magaalada Muqdisho.
Waxaa maalintii shalay warbaahinta dalka Turkigu ay shaacisey in Raysalwasaare kuxigeenka Turkiga Bekir Bozdag uu ka qaybgeli doono xafladda Caleema saarka isla markaana kulan la qaadan doono Madaxweyne Maxamuud marka caleemo.
Xaflkadda caleema saarka ayaa ka dhici doonta goobta sida weyn amaankeeda loo ilaaliyo ee horey loogu doortey Madaxweynaha J.F.S Mudane Xassan Shiikh Maxamuud, waana halkii la dhihi jirey Iskoolka Booliska.
Madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Suudaan Cumar Xassan al-Bashiir ayaa goor dhaweyd isaguna soo soo degay garoonka diyaaradaha ee Adan Cadde, waxaana halkaas loogu soo dhaweeyey si diiran iyada oo uu salaan ka qaadey ciidanka Soomaaliya waxaana loo galbiyey goobta caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Waxaa la filayaa in goor dhaw uu ka soo dego garoonka diyaaradaha ee Adan Cadde Madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti, waxaana uu ka qaybgeli doonaa xafladda Caleema Saarka Madaxweyne Maxamuud.
Amaanka Muqdisho ayaa maanta ahaa mid aad loo adkjeeyey waxaana ka soo qaybgeli doona xafladda Madaxweynaha lagu caleemo saarayo Madax kale oo caalamka ka tirsan iyo kuwa Maamulada Soomaaliya.
Madaxda kale ee la filayo in ay ka soo qaybgalaan waxaa ka mid ah:
Madaxweynaha dalka Uganda, Raysalwasaaraha Itoobiya, Raysalwasaaraha Kenya iyo madax kale oo ka socota Beesha Caalamka. Sidoo kale waxaa la filayaa in uu ka qaybgalo Xafladdaas Madaxweynaha Dawladda Soomaaliyeed ee Puntland. Dr.Cabdiraxmaan Faroole